नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि आ-क्रोशत पोखेका छन् । उनले ओली सामन्ती हिन्दु अति-वादीको आ-रोप लगाएका हुन् ।
पाँचखालमा वाईसीएलको नगर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, सामन्ती हिन्दु अतिवादी हो । तपाईले पशुपतिमा ज्वलहरी चढाएको त सुन्नु भयो । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर राम सीता हनुमान राखिदिएको छ । अब म राम सीता हनुमानसँग लड्न जाने कुरा त आएन । अनि कम्युनिस्टले यस्तो काम गर्छ त ?
केपी प्रवृत्ति कम्युनिस्ट वि’रोधी मार्क्सवाद वि’रोधी जनविरोधी राष्ट्रविरोधी हो । राज्यले कुनै धर्मलाई काखा पाखा लगाउने काम गर्नुहुँदैन, राज्य सबै धर्मप्रति समान हुनुपर्छ भन्ने विचार लिएपछि आफूमाथि प्रहार भएको र माओवादीलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न भएको उनको भनाइ थियो । प्रचण्डले केपी जति बुद्धि नभएको नेता कोही पनि नदेखेको पनि टिप्पणी गरे ।
‘दुईतिहाइको यति ठूलो अवसर थियो । चुप लागेर समझदारी पालना गरेको भए ओली महान नेता हुने अवसर थियो । तर गिद्धीभित्र गोबर भरिएपछि कसको के लाग्छ ? उनले भने ।
प्रचण्डले ओली छुटो बोल्न सिपालु भएको र नक्कली कुरा गरेर चक्मा दिने क्षमता भएको उल्लेख गरे । बुर्जुवा र प्रतिक्रियावादीमा बाहिर राम्रो देखाउन सिपालु हुने र सार चाही विकृत र गहिगुज्रेको हुने गरेको र त्यो गुण ओलीमा भएको उनको भनाइ थियो